Indlela yokwenza ezine iviniga
Unqulo & Umoya Amasiko eWiccan
Yenza ezine iviniga iviniga ukuze isebenziswe kwiintlobo ezahlukeneyo. UPatti Wigington
Iineeveshi iVinegar iyisithako esifumaneka kwiindawo ezininzi zeHoodoo kunye neentlobo zemilingo. I-recipe ibonakala iguquke kwiNtshona Yurophu, malunga nekhulu leshumi elinesihlanu, kwaye kukho ukuhlukahluka kwindlela yokwenza ngayo. Intambo ekhoyo phakathi kwazo zonke iimbali kukuba kwakukho isifo esibi kwidolophana, kwaye kuphela abantu ababesinda baba ngamasela amane. Ngamnye waba negalelo elilodwa kwisitya seviniga negalikhi, bawasela, kwaye kwandlela-thile basinda esichengeni.
Ekubeni bephilile kwaye bonke abantu befa, amasela amane ajikeleza idolophu kwaye aphanga izindlu ezingenanto. Ekugqibeleni babanjwa, baza bagwetywa ukuba baxhomeke, kodwa bakwazi ukuphuma emgodini ngokwabelana ngemfihlelo yabo eyimfihlo. Ingaba oku kuyinyani okanye akunjalo ukuqikelela, kodwa i-Four Thieve Vinegar iyinto ewusizo yokugcina isandla ngenxa yokuba ingasetyenziswa kwiintlobo ezahlukeneyo zesipilisi, ukusuka ekuphulukeleni ukuya ekukhuselweni ukuvalwa .
Umbhali kunye nootitshala uJessie Hawkins uthi, "Nangona igalelo liguquka ngokufana nefomula yale ngqungquthela yomlando, le nto ibalulekileyo: Ngexesha leengxabano (faka inkqonkqo yakho oyithandayo apha, i-Black Plague ixhaphake kakhulu, kodwa ingqungquthela uye wenza indlela eya eMelika, njengesibetho esabetha i-New Orleans), iqela labazalwana abane baqala ukuphanga abafileyo. Ekuqaleni, babenakunakwa, njengokuba wonke umntu uyazi ukuba ekugqibeleni uza kuhlawula ixabiso ngokubamba isibetho kodwa , kumangaliswa wonk 'ubani, baye bakwazi ukuphepha ukufumana isibetho kwaye baqhubeka bephanga amatye, bahlanganisa ubutyebi obuninzi. " Uyaqhubeka esithi, njengoko kuqhelekileyo kwiinguqu ezahlukeneyo zeengxelo, kwakukhona ulwazi lwabesilisa abane lwezonyango zamagalelo ezabagcina ziphila ngexesha leendyikitya yokufa. Uyongezelela ukuba umxube unamanye amagama, kuquka amaTeve Blend, Legend of the Thieves Blend, kunye ne-Grave Robbers Blend.
Okokuqala, fumana iviniga engcono ongayifumana. I-Apple cider iviniga ilungile, iwayini elibomvu iviniga lithandwa kakhulu. I-Peel kunye ne-mince ezine i-clove ezine-garlic uze uzifake kwiviniga, kwisitya esinesiqhekeza.
Ngokwesiko, isela ngalinye linikela isithako esisodwa - ukhethe nayiphi na enye elandelayo: ipolisi emnyama okanye ebomvu, i-cayenne okanye i-chili pepper, i-lavender, i-rue, i-rosemary, i-mint, i-sage, umhlonyane, i-thyme, okanye i-coriander. Yongeza ezi ngqangi.
Vumela umxube ukuba uhlale kwiintsuku ezine ezipheleleyo - abanye abantu batusa ukubeka ilanga, abanye kubhinethi emnyama. Ngayiphi indlela, qiniseka ukuba uyigubungele kanye kanye ngosuku. Emva kwosuku lwesine, lusetyenzise ngokupela.
Indlela yokusebenzisa ezine iVinegar
Nazi ezinye iindlela ongasebenzisa ezine iVinegar ezinezixhobo ezisemlenzeni:
Ukuvalwa : Sebenzisa le spell ukugcina umntu ephazamisayo kude nawe. Bhala igama lakho ekujoliswe kuyo kwelinye iphepha-ezinye izithethe zincoma ukuba usebenzise iphepha elibomvu, okanye isikhumba. Gweba iphepheni kwi-Four Thieves Vinegar. Gcwalisa uxwebhu lwephepha njengento encinci, kwaye ungcwabe kwindawo engcolileyo.
Ukukhuselwa : Sebenzisa ezine iineve uVinegar ukukhusela ukuhlaselwa ngumlingo, kunye nokukhusela ipropati yakho. Ukuyiphula ngokukhawuleza malunga nomda wepropati yakho, kwaye ugcine ungekho.
Ukuphelisa Ubudlelwane : Kwezinye iikhowudi zeHoodoo, kukho iintlobo zeentlobo ezisetyenziselwa ezine iineve uVinegar ukunqumla isibini, okanye ukudala ingxabano ebudlelwaneni.
Ukuphulukiswa : Esi sisisombululo esikhulu sokusebenzisa kwisithethe sokuphulukisa - emva koko, jonga imbali emva kwayo! Yisebenzise ukuthambisa umpopu womntu ogulayo, okanye udibe kwiindonga kunye nomgangatho wegumbi apho umntu ogulayo alala khona. Yikholwa okanye akunjalo, inokutshatyalaliswa ngaphakathi njengetoniki ukugcina izifo kude.
Ngubani u Astarte?
Ukusebenzisa iiSkrini zeNkcukacha zeNkcukacha zeSizwe kunye neNgciliso ekuSebenziseni iinjongo zeSLO
Ukuqonda iiMigodi ezinkulu zeMveli kunye nobuhlanga eMelika
Yintoni i-Contonation Contour?